Akụkọ - Foshan Smartroof International Co., Ltd.
PVC Roofing: Ihe I Kwesịrị Knowmara
N'ime ụdị ụlọ ọhụrụ niile dị n'ahịa taa, otu n'ime nghọta kachasị dị ntakịrị bụ ụlọ elu PVC. A na-echekarị PVC dị ka ọkpọkọ pipụ mmiri, mana enwere ike iji plastik a mee ihe dị oke mmetụta na ụdị ụfọdụ nke ụlọ dịka nchekwa na elu ụlọ. Ebe obibi ...
PVC Roofing: Gịnị bụ ya na Kedu uru ọ bara?
N'ihe banyere ụlọ elu azụmahịa, ndị nwe ụlọ nwere ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ ụdị membranes. Otu n’ime membrani a na-ere n’elu ụlọ nke ndị nwe ụlọ nwere ike ịtụle bụ ụlọ elu PVC ma ọ bụ polyvinyl chloride, otu ihe eji kpuchie elu ya nke dị larịị ma ọ bụ nke pere mpe. Ekene ...
Covid-19 Mmetụta Nyocha-Global Corrugated Metal Sheet Industry Market Report Report Ọmarịcha Ọganihu, Mpaghara na Ndị Egwuregwu Ndị Isi, pesdị, Ngwa, Ntugharị Ntugharị 2026
The "Corrugated Metal Sheet Market" nnyocha na-enyere aka inye ohere na nkọwapụta, isi nchoputa, uto ọkwọ ụgbọala na iche iche Ọnọdụ. A na-atụ anya ka ahịa akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-eto eto site na nde USD XX na 2020 na USD XX nde na 2026, na ọnụego uto nke X ...
Corrugated Metal Sheet Market Report 2019-2025 Global Industry Analysis, Trends, Market Size na amụma
UpMarketResearch na-enye akụkọ kachasị ọhụrụ banyere nyocha ụlọ ọrụ na amụma nke ahịa ahịa ọla kọpa zuru ụwa ọnụ site na 2025 ruo 2025. Akụkọ ahụ na-enye nghọta dị mkpa ma na-enye ndị ahịa uru ịsọ mpi site na akụkọ zuru ezu. Nke a bụ akụkọ kachasị ọhụrụ ma kpuchie nke ...
nkume-a na-ekpuchi nchara nchara nchara
Nkwupụta ahụ na-ewebata nchara nchara nchara nchara nchara nchara nchara nrịba (uru, mmepụta na oriri), nke ndị nrụpụta mebiri, mpaghara, ụdị na ngwa (ọnọdụ data 2019 na amụma na 2025). Ihe omumu a nyochara onodu ahia, uzo ahia, onu ogugu, ihe ga adi niru, mar ...
Ọdịnihu nke owuwu: Nrụ ụlọ
Okwu Mmalite: Igwe eji eme igwe na-aghọwanye ewu ewu n’ihi ụdị ya dị iche iche na ogologo ndụ ọrụ. Onye na - enye aka bụ Scott Gibson tụbara nhọrọ niile dị iche iche maka ime ụlọ, site na ihe gbasara ntinye. Edemede a gụnyere nkowa banyere igwe eji akwụ ụgwọ ...
Ahịa galvanized steel strand na-agụnye isi obodo / mpaghara data, uto azụmaahịa, nha ahịa, nyocha SWOT, ohere azụmaahịa, ngwa, ọnọdụ na amụma maka 2024
Home / Galvanized Steel Strand Waya Market gụnyere isi mba / mpaghara data, uto azụmaahịa, nha ahịa, nyocha SWOT, ohere azụmaahịa, ngwa, ọnọdụ na amụma banyere 2024 Akuko 2020-2024 "Galvanized Steel Strand Wire Market" na-enye uzo ahia, CAGR, ngwaahịa ...
Mkpa Mgbakọ Roolọ Dị na Mkpa Mgbe Na Mgbe COVID-19 Ọrịa
Septemba 7, 2020, New York (Global News) -Reportlinker.com kwupụtara ntọhapụ nke "Global Roofing Industry" akụkọ COVID-19 ọrịa na-efe efe na-eme ka ọ ghara ikwe omume iji wuchaa Ihe owuwu ihe owuwu, na nnukwu pasent nke ọrụ arụnyere. Oge nhazi nke nwa oge, ya mere ...
Gini mere na ekwesighi ikpochapu taịl nile dị na ya (The diasvant of asbestos roof taịl nile banyere nhicha)
Enweghị mgbochi na ikpughe asbestos. O nwere ike ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla, ọ bụ n'ihi ojiji asbestos n'ebe niile ruo ọtụtụ iri afọ. Ọbụna ụlọ gị (ee, ụlọ gị) nwere ike jupụta na ihe a na-egbu egbu. Ọrụ dị mfe nke ihichapụ taịl nile dị n'elu ụlọ dị ka nchekwa. Agbanyeghị, nke a nwere ike itinye gị, f ...
Ọghọm nke Roofing Shingle Roofing
Cons nke Asphalt Shingle Roofing Ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndọghachi azụ iji iji shingle shingle maka ụlọ gị: shingles asphalt na-adịkarị mfe ikuku elu - Chedị nsị nke asphalt dị ọnụ ala nwere ike bụrụ ihe na-adighi ike na ifufe siri ike, nke nwere ike ime ka ha t. ..
Nyochaa nhazi ụlọ nke ígwè nke ụlọ nri onwe onye
Otu ụlọ ọrụ ma ọ bụ karịa na-ejikwa saịtị a nke Informa PLC, yana nwebisiinka niile bụ nke ha. Officelọ ọrụ a na-edebanye aha nke Informa PLC bụ 5 Howick Place, London SW1P 1WG. E debara aha ya na England na Wales. Nọmba 8860726. Sistem ụlọ a na-ewu ewu ebe a na-ewu ewu maka ịchekwa ụlọ maka ị ...
American metal ụlọ
Inglọ elu igwe nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na US, mana rue afọ 20 gara aga, ọ bụ obere egwuregwu na-ewu ụlọ, yana naanị oke 3.6% nke ahịa mgbazigharị. Dabere na otu ụlọ ọrụ na-azụ ahịa otu. Kedu ihe mere? Mgbidi ụlọ dị ugbu a ...